SKU: 2919-66-6. Category: Hormones
Ọbara arọ: 396.52
- ADI nke 0-0.03 μg / kg nke ịdị arọ ahụ dị ike, nke bụ otu ADI kachasị nke 1.8 μg maka
- Ọ bụ naanị abụba na imeju na-agụnye ihe dị iche iche nke ihe fọdụrụnụ na-atụle na ihe ndabere oge; usoro
- Ndị na-akwado akwadoghị usoro nyocha nke kwesịrị ekwesị maka nlekota nyocha.
- Usoro nyocha nke kwesiri ịkọpụta ihe fọdụrụ na Melengestrol acetate ntụ ntụ n'ime imeju na abụba.
Na nzaghachi nke arịrịọ Kọmitii ahụ, onye nkwado ahụ nyere usoro kemịkal nke a kwadoro maka nyocha site na 58th
A na-eji mkpịsị Nlekọta 166 zuru oke mee ihe na nyocha oge MGA (105 na 116 ụbọchị). Enwetara ịrị elu (P <0.05) n'ọtụtụ dị elu nke mmiri ara, nke kachasị site na mkpịsị uzo kachasị elu nke ovaries a. Ọnụ ọgụgụ nke estrogen na-arịwanye elu na-egosipụtakwa ogo mmadụ, na ụyọkọ nke ịdị arọ nke na-emepụta na MGA na-arịwanye elu. Mgbe ọgwụgwọ na MGA gachara, njedebe dị arọ nke heifers jetted na-arịwanye elu. Ụdị kachasị maka ọganihu na-arịwanye elu na-eme ka ọ dị nso na 0.4 mg nke MGA kwa ụbọchị / nwa ehi.
Zere ikpughe - nweta ntuziaka pụrụ iche tupu eji.
Melengestrol acetate ntụ ntụ Ezi ntụziaka